किन बोलाए प्रचण्डले अकास्मात पार्टीको विस्तारित बैठक ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more किन बोलाए प्रचण्डले अकास्मात पार्टीको विस्तारित बैठक ?
किन बोलाए प्रचण्डले अकास्मात पार्टीको विस्तारित बैठक ?
फागुन २ गते, २०७४ - १२:५३
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय कार्यालयको विस्तारित बैठक बोलाएको छ । एमाले–माओवादी केन्द्रको एकता संयोजन समितिको बैठक बस्नुअघि विस्तारित बैठक बोलाएको हो ।
पार्टी एकताको तयारी गरेका एमाले–माओवादी केन्द्रको एकता संयोजन समितिको बैठक आजै दुई बजे बस्ने तयारी छ । सो बैठक अघि अध्यक्ष प्रचण्ड निवास खुमलटारमा माओवादी बैठक बोलाएको प्रवक्ता पम्फा भुसालले जानकारी दिइन्। ‘पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक अगाडि हाम्रो कार्यालयको विस्तारित बैठक बस्न लागेको हो’, भुसालले भनिन्।
कार्यालय बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले उमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग भएको छलफलका विषयमा ‘ब्रिफिङ’ गर्ने बताइएको छ।
फागुन २ गते, २०७४ - १२:५३ मा प्रकाशित